N'ihi Gịnị Ka Akpọsa? | RayHaber | raillynews
HomeOzi okporo ụzọNtak-akpọsa?
Ọ bụrụ na anyị na-agụnye ụzọ ụgbọ oloko a haziri ahazi, ụgbọ okporo ígwè, okporo ígwè, ọrụ mpempe akwụkwọ na ụdọ na ịkwado ego ndị ọzọ dị na obodo na obodo ndị ọzọ na-emepe emepe ma e wezụga nnukwu obodo, a na-atụ anya ka ego ahụ ruru dollar 500!
RayHaber Gini mere eji guzobe ya?
Iji duzie nghọta nke ndi oru nta akuko na mpaghara uzo di ngwa ÖzenRay Media dị ka, RayOZIAnyị guzobere. ÖzenRay jikwa ya RayHaberRaillyNews, TeleferikHaber na HighwayHaber'i tinyere na weebụsaịtị anyị!
Ị nwere ike ịchọta ozi gbasara ụgbọ okporo ígwè dị ugbu a, okporo ụzọ na ụzọ ụgbọ okporo ígwè rayhaber.comEbidola akwụkwọ nnwale ya na 23.11.2011 yana mbipụta akwụkwọ gọọmentị ya na 01.01.2012. Nwere ike ịgbaso ozi niile ụzọ ụgbọ oloko dị na mba na mba na ụwa, ị nwekwara ike ịgbaso oghere na nsonaazụ ya kwa ụbọchị yana taa. Anyị nọ n'ọrụ gị nke ọdịnaya nwere ozi ọma pụrụ iche, maapụ, vidiyo na kọlụm. I nwekwara ike ichota akuko edere site na mpaghara na mpaghara di iche-iche na webusaiti anyi!
Ebe nrụọrụ weebụ anyị, nke nwere mkpokọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70 na afọ 20, bara ụba karịa isi mmalite ndị ọzọ ma zigara ndị ọrụ okporo ụzọ ụgbọ oloko karịrị puku atọ. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ndị mmadụ, òtù dị iche iche na weebụsaịtị ndị na-edebanye aha saịtị anyị na puku iri RSS RSS.
Ozi ntanetị 70
Mgbasa ozi 100 n'asụsụ dị iche iche
Nkwupụta nke usoro nrịba ọhụụ na akwụkwọ akụkọ nro
Mkpesa akpaaka na mgbasa ozi ọhaneze
Ihe ndi n’egosi anyi anyi
Ndebanye aha ngalaba: 2011
Ndebanye aha Akụkọ Google
Alexa zuru ụwa ọnụ / TR: 98K / 1350
Na-akwado site na nkwekọrịta na netwọk mmekọrịta RAYHABERSite na nhọta gị na-aba ụba, na-amụba ohere gị nke ịbụ ndị a ghọtara na ndị na-ege gị ntị.
Facebook: Rayhaber Sayfası 13K + RayHaber otu 5K
Daily 70.000 ndị nleta pụrụ iche
4.000 na-edebanye aha email
N'ozuzu iji Alexa ụwa mbụ Ebe 80.000 ke akpa mgbe Turkey 1.350 saịtị RayHaber na-aga n’ihu.
Ọhụrụ anyị lekwasịrị nke 10.000 na ụwa nke mbụ, ịbụ na n'elu 100 weebụsaịtị na Turkey.
☞ Bipụta Okwu Mmalite!
Ihe Mere Kpọsaanụ na RAYHABER & RAILLYNEWS?
A ga-ewetara teknụzụ ụgbọ elu dị elu nke obodo Turkey ruo afọ 29 dị ka ebumnuche mbụ, kilomita 2023 eruola. A na-eme atụmatụ ijeri dọla 25.000 ijeri dollar na 250% abanyelarị. A na-eme atụmatụ okporo ụzọ ụgbọ elu ogologo niile dị ka puku iri atọ na puku ruo mgbe 70. Na mgbakwunye na nke a, ojiji nke ụzọ ụgbọ ala nwere njikọ ụwa na ebe mgbagha ga-abawanye nke ukwuu.
Ọ bụrụ na anyị gụnyere ụzọ ụgbọ oloko ezubere, ụzọ ụgbọ oloko, tram, monorail na eriri eji arụ ọrụ na mmezi nke itinye ego na obodo ndị ọzọ na-emepe emepe na mgbakwunye obodo ndị ọzọ, ego a na-atụ anya inweta ego ruru ijeri US $ 500!
Gịnị kpatara ya RayHaber e hiwere ya?
Enweghị usoro mgbasa ozi siri ike na-anya ụdị ụgbọ okporo ígwè na-eto ngwa ngwa na Turkey a. Ya mere, ÖzenRay Media ewepụtara na RAYHABER na RAILLYNEWS ụdị.
Nwere ike ị nweta ozi ọma usoro ụgbọ okporo ígwè, eriri ụzọ na sistemụ ụzọ rayhaber.com. Anyị malitere akwụkwọ nnwale mbụ anyị na 23.11.2011 yana mbipụta akwụkwọ gọọmenti na 01.01.2012.
Nwere ike ịgbaso ozi niile ụzọ ụgbọ oloko dị na ntanetị mba na mba niile ma ị nwere ike ịgbaso oghere na nsonaazụ kwa ụbọchị yana taa. Anyị nọ n'ọrụ gị nke ọdịnaya nwere ozi ọma pụrụ iche, maapụ, vidiyo na kọlụm. I nwekwara ike ichota akuko edere site na mpaghara na mpaghara di iche-iche na webusaiti anyi!
Ebe nrụọrụ weebụ anyị, nke nwere mkpokọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70.000 na akụkọ ozi afọ 25, bara ụba karịa isi mmalite ndị ọzọ ma zigara ndị ọrụ okporo ụzọ ụgbọ oloko karịrị puku atọ. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ndị mmadụ, òtù dị iche iche na weebụsaịtị ndị na-edebanye aha saịtị anyị na ntanetịime RSS puku mmadụ iri na atọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite ụlọ ọrụ gị nke ọma, biko kpọtụrụ anyị ma anyị ga-atụle nhọrọ mgbasa ozi kwesịrị ekwesị.
iCalendar enyere aka na kalịnda / ihe omume
Nkezi akụkọ 22 kwa ụbọchị
Nsuanetop ke usem 100
Otu site na mpaghara na ọnọdụ ha
Afọ iri abụọ na ise nke akwụkwọ akụkọ
Nkwupụta nke usoro nrịba ọhụụ na akwụkwọ akụkọ maka ụzọ ụgbọ oloko
Taa na ngalaba akuko
Mkpesa akpaaka na mgbasa ozi mmekọrịta
Ọhụụ na usoro teknụzụ
Mmepe: Akpaghị aka
Nhota nke asusu
A na-ebipụta akụkọ anyị 100 asụsụ dị iche iche, ndị obodo na ụlọ ọrụ na-esokwa ya.
RAYHABER Ndị na-elekọta mmadụ na-akwado ya site na akpaaka akpaaka.
Facebook: Rayhaber Page 12K + RayHaber otu 5K
Ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa
Kwa ụbọchị 70.000 ndị ọbịa pụrụ iche
Ndị debanyere aha email nke 000
Profaịlụ Onye Ọbịa
Mba Europe 20%
10% Mba Ndị Ọzọ
25% Womenmụ nwanyị
Ndị na-ege ntị n'ozuzu ha bụ ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè
Ọtụtụ ndị na-ege ntị si mba ọzọ na-agụ akwụkwọ site na mba ọzọ na-agbaso saịtị anyị mgbe niile.
Alexa ụwa is 96.000 & Turkeynye Turkey ike is 1.350
Ihe mgbaru ọsọ anyị ọzọ bụ 10.000 (World) / 100 (Turkey)
Akpado na MOZ
Rayhaber: PA: 41 DA: 33 Akara Spam: 6%
RaillyNews: PA: 34 DA: 39 Akara Spam: 2%
3. Gịnị mere ọdụ ụgbọ elu ji egbu oge?
Mpempe akwụkwọ mgbasa ozi maka ESHOT Buburu
Ihe mere ụgbọ USB ahụ ji bulie Ordu
Çarşamba-Samsun Railway Emechibidoro
Igwe ụgbọ ala BalBova mechiri maka afọ 4
Fatih Sultan Mehmet Bridge emezi ihe mere 3 ọnwa ga-adịru
Ntak emi ọtọn̄ọde ke obot ke Erzurum ama ọduọ
Ankara Yenimahalle Sentepe Cable Car Project Ntak-a